Baadi-goobka Sirta Nolosha | Doodwadaag waa Danwadaag.
Horaa loo yiri lama waraysto mar dhoof iyo mar duulba e balse aan idinla wadaago safar dalxiis oo aan aniga iyo qoyskayga iyo Abdikarim Hassan iyo qoyskiisa ku tagnay magaalada Agadir, Marooko.
Agadir waxay ku taal badweynta Atlaantiga. Waa magaalo qurux badan, nadiif ah oo jidadkeeda aadan ku arkayn qashin iyo dad dayacan. Jawiga cimilada waxa aan bishan Luulyo ku qiimeeyey kulka Muqdisho ee bisha Feberaayo. Neecawda badda ayaa heerkulka jebisa oo badanaa dareemi maysid huur iyo kul badan. Waa jewi uu ku raaxaysanayo qof ka soo dhexbaxay tallaagadda dabiiciga ah e Yurub.
Magaaladan dadka u badan ee degan ama degaan ahaan u leh waa dadka Amaasiqada(Berbers) waxaa wehliya Carabta iyo Faransiis u badan waayeel nimcadan ku raaxaysa inta geeridooda ka hartay. Carabi(afguri ah), Faransiis iyo Afka Berberka ayay dadku ku hadlaan. Intii aan magaalada dhex marayey ishaydu ma qaban qof buuran. Iska illaw cayilka xaddhaafka ah. Dabaqadaha bulsho leedahay waa laga wada helayaa magaaladan. Dabaqad hanti leh, mid dhexe iyo mid fakhrigu ka muuqdo oo qaarkood ay tuugsanayaan.
Ujeeddada qoraalkaygu ma ahayn in aan idiinka sheekeeyo dhismayaasha magaalada iyo dadka e waxaa maskaxdayda aad ugu soo laalaabtay dhawr shay.
1- Marooko waa waddan sabool ah, waxsoosaarkiisuna uu xaddidan yahay. Waxaynu ka wada dheregsannahay in saboolnimadu tahay hooyada colaadaha iyo caddaalad darrada. Haddaba waddanka Marooko guud ahaan waa waddan ayan ka jirin colaad. Sidee ayey ugu suurtagashay in ay iyaga oo sabool ah helaan xasilooni siyaasadeed?
2- Amniga waddankan gaar ahaan magaaladan Agadir waa mid aad iyo aad uga sarreeya UK. Waa mid aan ka marakacayo. Magaalooyinka UK haddii aad habeenkii keligaa socotid waxaa kugu jira dareen baqdin oo waxaa suurtagal ah in tuugo, cunsuri iyo sakhraamiin ku helaan. Magaaladan Agadir oo aan kaga qiyaas qaatay dalka oo dhan habeen barka haddii aad socotid kalsooni ayaad ku socon. Waa su’aale amniga heerkan ah ee aan Yurub iyo Carabta midna laga helayn sidee ayey ku gaareen.
3- waxaa aad ii soo jiitey qabowga iyo qanaacada diineed ee dadku ayan ku mashquulsanayn isgaalaysiin, xalaal iyo xaaraan, lebiska qofka iwm. Labadii boqol ee tillaababa waa masaajid. Waxa aan ku tukadaa masjid ii dhaw. Aadaanka hore bes ayaa u furan makarafoonka dibedda. Salaadaha codka kor loo qaado waxa aad maqlaysaa uun marka aad dhawr tillaabo u jirtid uun. Waxaa kaloo aad ii soo jiitey in salaadda Jimce khudbadda ka hor ay culimada masjidku si wadajir ah u akhriyaan hal jus, waa hab subaceenii u eg ka se duwan. Sidoo kale waxaa igu cusbaa saddex aadaan oo ka horreeya khudbadda Jimcada. Ma arag xarakooyin iyo wadaado caraysan e sidee ayey reer Marooko ugu guuleysteen xakamaynta wadaaddada caraysan ee ku falaada maskaxda da’yarta?
Marooko waa boqortooyo masaajidda looga duceeyo boqorka,dhaxalsugaha iyo qoyskiisaba. Waxaynu ognahay in dadku beryahan dambe ayan jeclayn xukunka boqortooyada. Sirta baaridda inooga baahan waa sidee reer Marooko ugu guuleysteen in ay isla helaan amni, maciishad isku dheellitiran iyo qanaaco diineed?